Maxaa ka jira in Farmaajo amro weerarada Mareykanku ku qaado Al-Shabaab – Warfaafiye:
Maxaa ka jira in Farmaajo amro weerarada Mareykanku ku qaado Al-Shabaab
Ali Mohyadin Aug 11, 2017 0
Madaxtooyada Soomaaliya iyo Wasaaradda Warfaafinta ayaa dadka Soomaaliya xilli waliba oo howlgal ay sameeyeen ciidamada Mareykanka baahiya inuu amray madaxweynaha Soomaaliya.
Baraha bulshada ayaa wararkaasi si weyn loogu adeegsadaa iyadoo lagu muujinayo dowladnimada ay gaartay Soomaaliya markii uu madaxweynaha cusub ee Maxamed C/llaahi Farmaajo xilka la wareegay.
Qoraalkii ugu dambeeyay ee soo kasoo baxay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa lagu sheegay in Madaxweyne Farmaajo oo ogolaaday fulinta howlgallada Mareykanka Bishii Maarso 2017, markaasoo ahayd xilliga kaliya ee qorshahan laga saxiixay. Taasoo caddeyn u ah in ogolaashaha Farmaajo uu dhacay mar kaliya ee aanay jirin wararka dowladu faafiso markii howlgal dhacaba in amarkiisa uu bixiyay Madaxweynaha Soomaaliya.
HOOS KA AKHRI WAR-SAXAAFADEEDKA AFRICOM
Dowladda Soomaaliya ayaa hore uga dalbatay Maryekanka in la ogeysiiyo marka la fuliyo weerarrada ka dhank ah Alshabaab iyo warbixintooda, taasoo loo ogolaaday xiligii dowladii Xasan Sheekh, waxaana lagu wargeliyaa howlgallada la fuliyo madaxweynaha iyo taliyaha NISA, balse ogolaashaba ayaa mar qura dhacay oo ahayd March 2017.